Sida Loo Caawin karo Dhalinyaro La ildaran Xanuunka Cunto | Bezzia
Maria Jose Roldan | 08/05/2022 12:53 | Dhallinyaro
Waa xaqiiqo in dhibaatooyinka maskaxdu ay kordhiyeen imaanshaha masiibada. Guud ahaan dadka, dhallinyaradu waa mid ka mid ah kooxaha ay ku jiraan cilladahaan sida aadka ah. Inkasta oo dhibaatooyinka maskaxdu ay kala duwanaan karaan, kuwa la xidhiidha cunista waxay u muuqdaan inay saameeyaan tiro badan oo dhalinyaro ah.
Maqaalka xiga waxaan ku tusi doonaa sidii loo caawin lahaa dhalinyarada qaba nooc ka mid ah cilladda habdhaqanka cunnada.
1 Calaamadaha digniinta ee ku saabsan xanuunka dhimirka
2 Sida waalidku u dhaqmaan haddi ilmahooda uu ku dhaco cunto xumo
Calaamadaha digniinta ee ku saabsan xanuunka dhimirka
Qofka da'da yar ee la ildaran xanuunka wuxuu bilaabaa inuu ka fogaado meelaha la wadaago ee guriga wuxuuna door bidaa inuu gooni isu taago qolkiisa. Kala fogaanshuhu wuxuu ka dhacaa xagga qoyska iyo heerka bulshada.
Isagu lama wadaago xaaladda shucuureed ee qoyskiisa oo wuxuu noqdaa mid aad u soo jiidasho leh. Xidhiidhka qoyska ayaa ku dhow wax aan jirin oo dabeecadiisa ayaa gebi ahaanba is beddeshay. Ninkii dhallinyarada ahaa waxa uu noqdaa mid aan naxariis lahayn, rajo-beel iyo dagaal badan.
Xidhiidhka jidhka ayaa muhiimad wayn u leh nolosha dhalinyarada. Waxaad dooran kartaa inaad si qasab ah isku eegto muraayadda ama gabi ahaanba iska diido oo aad diido muuqaalkaaga jireed. Habka labiska sidoo kale gebi ahaanba wuu beddeli karaa.
Sida waalidku u dhaqmaan haddi ilmahooda uu ku dhaco cunto xumo
Qoyska ayaa door lama huraan ah ku leh caawinta qofka da'da yar, ee la ildaran cunno xumo. Markaa waxaanu ku siinaynaa tilmaamo aad ku caawinayso qofka da'da yar ee ka cabanaya cunto xumo:
Waxaa muhiim ah in aan si joogto ah loo dul saarin ilmaha, gaar ahaan wakhtiyada cuntada. Dabeecaddan dhinaca waalidka ayaa xaaladda ka sii dari doonta.
Waa inaad iska ilaalisaa inaad faallo ka bixiso cuntada, haddii kale Qofka dhalinyarada ah waxaa laga yaabaa inuu dareemo xumaan iyo dembi ku saabsan xaaladda oo dhan.
Waalidiintu waa inay iska ilaaliyaan inay faallooyin ka bixiyaan muuqaalka jirka mar kasta.. Is-sawirku wuxuu ka ciyaaraa door aasaasi ah fasalkan cudurada la xiriira cunnada.
Khalkhalka habdhaqanka cunnidu maaha wax aan macno lahayn maadaama loo arko cudur halis ah oo kakan. Sidaa darteed waa in waalidku u dulqaataan horumarka ubadkooda.
Waa muhiim in dib loo soo celiyo xiriir wanaagsan oo lala yeesho qofka dhalinyarada ah. Way wanaagsan tahay in la arko in uu haysto qof uu ku tiirsan yahay haddii uu u arko inay ku habboon tahay.
In kasta oo ay jirto go'doon iyo dabeecad la'aan, waxaa lama huraan ah in aan la dayacin xiriirka qoyska wakhti kasta. Hawlaha qoyska ayaa lagula talinayaa. iyo in la wada qaato wakhti si loo abuuro jawi qoys oo wanaagsan.
Waalidiintu waa inay aad u taageeraan mar kasta. laakiin si toos ah masuul ugama aha bogsashada ilmahaaga.
Marka la soo koobo, ma fududa waalidiinta daawashada cunugaada oo ka cabanaya cunto xumo. Waa xanuun maskaxeed kakan oo u baahan samir dhanka waalidka ah iyo dulqaadka ubadka. Caawinta waalidku waa aasaas si qofka dhalinyarada ah ee qaba TAC uu uga gudbo dhibaatada maskaxeed ee noocaas ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Dhallinyaro » Sida loo caawiyo dhallinta cillad cunto cunid